Akwụsị Ịkwụ Ụgwọ Ngwá Ọrụ n'Ebe Aerospace na Ụlọ Ọrụ Nchebe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Akwụsị Ịkwụ Ụgwọ Ngwá Ọrụ n'Ebe Aerospace na Ụlọ Ọrụ Nchebe
Ọbịa ọbịa • Ọrụ Mgbasa Ozi Waya
Chains ọkọnọ Aerospace na Defense (A&D) na -eche oge siri ike ihu.
Ọrịa COVID-19 ebutela ụlọ ọrụ ụgbọ elu niile ikpere ya, na-ahapụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya ka ha na-ama jijiji ịlaghachi na ọkwa nrụpụta nkịtị.
Gọọmentị, na nzaghachi maka akụ na ụba na -emebi emebi, belatara mmefu ha na A&D na ngwa agha.
Ndị ọchụnta ego nkeonwe, n'otu ụzọ ahụ, belatara mmefu na akụrụngwa ikuku.
Omume a ahapụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na -enweghị ntụkwasị obi onye mmekọ ọkọnọ ikuku na -ama jijiji. Mana ọ bụghị naanị agbụ ọkọnọ A&D na -ata ahụhụ. Ọchịchị Biden mere n'oge na -adịbeghị anya nyocha ụbọchị 100 nke agbụ ọkọnọ dị mkpa. Nchọpụta ahụ gosipụtara adịghị ike dị iche iche na ụlọ ọrụ na -enye ọkụ.
United States adaala site na pasent 37 nke mmepụta semiconductor zuru ụwa ọnụ ruo pasent 12 n'ime afọ 20 gara aga. United States ugbu a na -emepụta naanị pasent 6 ruo 9 nke mgbaka ezi uche tozuru oke, teknụzụ semiconductor dị elu. Dị ka onye isi ala si kwuo, pasent dị ala a “na-eyi egwu akụkụ niile nke eriri semiconductor yana asọmpi akụ na ụba anyị ogologo oge.”
Ọdịda ọnụahịa adaala na nchịkwa Biden na -ekwupụta azụmahịa "ike iku ume," nke onye nnọchi anya azụmaahịa US Katherine Tai na -achị, nke "ga -atụpụta omume mmekorita nke otu na nke ọtụtụ megide omume azụmahịa na -ezighi ezi nke mebiri agbụ ọkọnọ dị mkpa."
Ka ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọchụnta ego na-elekwasị anya n'ụzọ dị ọnụ ahịa iji gboo mkpa ikuku ha, ndị nrụpụta A&D kwesịrị ibelata ọnụ ahịa iji nweta azụmahịa na idobe oke uru.
Nke a bụ usoro iji nyere obere na nke etiti aka ụgbọelu ndị nrụpụta nwere ike imetụta njikarịcha ihe ọkọnọ iji belata ọnụ ahịa:
1. Digitize ọkọnọ ọkọnọ
Ụdị usoro ọkọnọ oge gboo na -arụ ọrụ n'ahịrị, ndị na -eme iwu na -enwekarị ụzọ dị warara nke usoro ọkọnọ zuru oke, na -eduga na lags ga -ekwe omume na mmefu mmefu.
Agbamume ọkọnọ nke digitized, agbanyeghị, na -enye nlele nke ọma maka eriri ọkọnọ maka idoanya ka mma, mmekọrịta, mgbanwe na nzaghachi ngwa ngwa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, digitization na -eji data iji dozie agbụ ọkọnọ.
Mwekota nke data n'ime usoro ọkọnọ niile na -enyere aka n'ịdị mma nke eriri ọkọnọ site na ịhazi na ikpebi njedebe ikpeazụ nke inye ihe nwere oke mmadụ itinye aka.
Dịka ọmụmaatụ, ngwa ịre ngwaahịa, sistemụ onyunyo, nrụpụta agile, ọgụgụ isi, na igwe ndị na-ahazi onwe ha nwere ike tinye na sistemụ ọkọnọ maka sistemụ ngwa ngwa na mgbanwe.
Iji nweta digitization nke eriri ọkọnọ gị, ọ ga -adị mkpa ka gị na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịkekọrịta ihe zuru ụwa ọnụ nwee mmekọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ na US. Akwụkwọ ntuziaka a depụtara ndepụta ụlọ ọrụ na -ahụ maka njikwa ọkọnọ kacha mma n'ụwa niile nke na -arụsi ọrụ ike na ngalaba ikuku na nchekwa.
2. Jiri Ngwa Ngwa Ego
Ịghọta mmefu ndị na -ebubata ngwaahịa na ọnụego yinye na -enyere ndị nrụpụta Aerospace na Defense aka inweta ọnụ ahịa maka iwu ha. Ọtụtụ ndị na -emepụta ihe na -eche na a na -akwụzị ọnụ ahịa ndị na -ebubata ngwaahịa. Agbanyeghị, enwere ike gbanwee ụgwọ ụfọdụ ma ọ bụrụ na onye nrụpụta nwere ozi ziri ezi. Ntụle dị ọnụ ahịa atụmatụ bụ ụzọ aga.
Dị ka US Ụkpụrụ Nnweta Federal (FAR) 15.407-4, nyocha ọnụ ahịa atụmatụ kwesịrị ịtụle "akụ na ụba na arụmọrụ nke ndị ọrụ nkwekọrịta, usoro, akụrụngwa, akụrụngwa, ezigbo ihe onwunwe, sistemụ arụmọrụ na njikwa."
Anyị na -akwado ụdị abụọ maka ikpebi usoro ịkwụ ụgwọ ziri ezi:
Kwesịrị-efu Model: N'ihe atụ a, onye ọrụ ngo na -eji ọnụ ahịa ahịa azụmaahịa na akụnụba iji chọpụta ọnụ ahịa ahịa dị mma. Ihe nlereanya a anaghị atụle ndị na -ebubata ngwaahịa na -ajụ ọnụ ahịa kama ọ na -achọpụta ihe ngwaahịa ga -efu dabere na ihe ndị dị ka akụrụngwa, ọnụ ahịa dị elu, ọrụ na onu oriri.
Nnyocha na-akụda ala: Ntụle na-akụda ala na-akụrisị ngwaahịa n'ime obere mpaghara iji kọwaa ọnụ ahịa ma ọ bụ uru bara uru nke mpaghara ọ bụla dabere na arụmọrụ ya. Ewezuga imepụta ụlọ ọrụ, ngwa a na -enyocha ike, ike, arụpụtaghị ihe, ntụkwasị obi, nchekwa na atụmatụ ndị ọzọ.
Mụtakwuo maka iji akụrụngwa na -efu ọnụ ke ibuotikọ emi.
3. Ndepụta ndebanye aha na Ngwaọrụ
Ndị na -ahazị kwesịrị iwepụta ndepụta nlele na ngwaọrụ ndị nduzi ga -eji tupu ha azụta ihe. Ndepụta ndebanye aha dị otu a ga-ewepụta aro dịka ma onye nrụpụta nwere akụrụngwa nwere mmefu ego mana ọ nwere ike rụọ otu ọrụ.
Ngwaọrụ a nwere ike ịbụ eserese na akwụkwọ ọrụ na -enyere onye ntụzi aka ka ọ mepụta ngwa ngwa ngwa ngwa, jupụta ego maka ndị mebere ya na ndị na -ere ahịa ndị ọzọ, wee nyochaa usoro ahịa.
Ndị isi kwesịrị inwe echiche doro anya maka mkpa agbanyeghị ma onye na -ebubata ngwaahịa ọ na -achọ ọnụọgụ opekata mpe. Ebumnuche kwesịrị ịbụ ọ bụghị naanị iji zere imecha otu ihe kamakwa ibelata ngwa ahịa.
4. Gị na ndị na -ebubata ahịa na -akparịta ụka nke ọma
ọtụtụ Aerospace na agbachitere ụlọ ọrụ kwenyere na ha enweghị ego zuru oke iji kwenye ndị na-ere ahịa ha ka ha belata ọnụ ahịa, ọkachasị ndị na-ere ahịa gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na mmemme ndị bụ isi.
Companieslọ ọrụ ndị a na -ahapụ egwuregwu ahụ tupu ọ malite. Agbanyeghị na mkparịta ụka abụghị njem n'ime ogige, enwere ụzọ ole na ole ụlọ ọrụ Aerospace na Defense nwere ike iji kwalite ụgwọ.
Kpebisie ike ọnụ ahịa agbachitere agbachitere
Ọtụtụ ndị na -emepụta ihe na -enwekarị obere nghọta gbasara akụ na ụba elementrị maka akụrụngwa sitere na ndị na -ebubata ngwaahịa. N'ihi nke a, ihe mbụ ị ga -eme bụ ị nweta ezi ebumnuche ebumnobi maka ihe ndị mejupụtara ga -eri. Ụlọ ọrụ nwere ike tinye ọtụtụ ụzọ iji mezuo nke a.
Ụlọ ọrụ na-eleba anya ka ọnụ ahịa onye na-ebubata ngwa ahịa maka otu mpaghara na-agbada n'usoro usoro ịkwụ ụgwọ dị n'elu. Maka akụrụngwa ọkaibe, ngwaahịa mbụ emechara na ahịrị mgbakọ na -efu ihe karịrị otu narị, nke n'aka nke ya na -efu ihe karịrị puku.
Ọnụego mbelata maka ọnụ ego sistemụ niile bụ njikọ ahaziri n'etiti mkpokọta mmepụta ụlọ ọrụ yana ọnụ ahịa mmepụta. N'inye ọnụ ọgụgụ nkeji, ụdị ọgbakọ achọrọ, yana ọnụ ahịa mbido mbido, usoro ọnụ ego na-egosi ihe onye na-ere ahịa nwere oke ga-achọ mgbe ọnụọgụ ole.
E nwere ụzọ dị iche iche na-agbada elu iji chọpụta ọnụ ahịa ebumnuche. Nhazi usoro ngwaahịa gụnyere ilele okirikiri atụmatụ nke mpempe igwe enyere. Ndị ahụ na -adịkarị n'ahịa efu, ụlọ ọrụ nwere ike ikpebi uru dabara adaba maka nke ọ bụla n'ime ha, yana ụgwọ ọrụ iji tinye ha ọnụ.
Ụlọ ọrụ nwekwara ike lelee ọnụ ahịa ndị mebere ya nwere atụmatụ yiri ya. Ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a bụ ihe akaebe nzuzu, mana site na iji ha niile, ụlọ ọrụ nwere ike wepụta oke maka ọnụ ahịa ebum n'uche ziri ezi nke otu akụkụ. Nke ahụ na -enye ha ihe ndabere siri ike na nke a pụrụ ịtụkọ ọnụ maka iso onye na -ebubata ngwaahịa na -emekọrịta ihe iji belata ọnụ ahịa.
Zụlite ihe nleba anya n'aka onye na -eweta ngwaahịa
Ụzọ ọzọ gị na ndị na -ebubata ahịa ga -esi na -emekọrịta ihe nke ọma bụ ịghọta ebe enwere ike itinye ego. N'ọtụtụ oge, ụlọ ọrụ nwere ike nweta ike karịa ka ha chere site na iji data dị na mpaghara ụfọdụ. Nke mbu, agbanyeghị, ndị nrụpụta akụrụngwa mbụ (OEM) kwesịrị ịghọta etu ndị na -ebubata ahịa si enweta uru ha yana otu ego ha na -achọ si abawanye n'ime oge.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na -ebubata ngwa ahịa na -eme ka ego ha na -erere OEM dị ka akụkụ nke nkwekọrịta mbụ maka sistemụ. Ndị ọzọ na -enweta ọtụtụ ihe site na ire gọọmentị ozugbo na ụwa ma ọ bụ gọọmentị ha.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị ọzọ na -ekwusi ike mgbe irere ngwongwo maka igwe na -apụ n'anya ka oge na -aga. Site n'ịghọta atụmatụ ụlọ ọrụ na -ebubata ngwaahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ikpebi otu kacha mma iji soro onye na -ebubata ngwaahịa kwurịta okwu iji wulite ike n'oge mkparịta ụka.
October 6, 2021 na 10: 25
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na -ebubata ngwa ahịa na -eme ka ego ha na -erere OEM dị ka akụkụ nke nkwekọrịta mbụ maka sistemụ. Ndị ọzọ na -enweta ọtụtụ ihe site na ire gọọmentị ozugbo na ụwa ma ọ bụ gọọmentị ha. Daalụ maka ịkekọrịta ozi a.